‘कबीर सिंह’ले दर्शकको मन जित्यो, कमाई कति ? - Gokarna News from Nepal
‘कबीर सिंह’ले दर्शकको मन जित्यो, कमाई कति ?
एजेन्सी– बलिउड अभिनेता शाहिद कपूर स्टारर फिल्म ‘कबीर सिंह’ ले दर्शकको मन जितेको छ । तर, केही दर्शकले भने यो फिल्मलाई वाहियात फिल्म पनि भनिरहेका छन् । केहीले फिल्ममा राखिएका संवादलाई लिएर समेत नकारात्मक टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
यो फिल्म हेरेका दर्शकमध्ये धेरैले शाहिद कपूरको अभिनयले मन जितेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
गएको शुक्रवार रिलिज भएको यो फिल्मले बक्स अफिसमा कमालको व्यापार गरिरहेको छ । फिल्मले शुक्रवार २० करोड २१ लाख रुपैयाँ ग्रस कलेक्सन गरेको छ । यस्तै फिल्मले शनिवार पनि झण्डै २२ करोड ७१ लाख कलेक्सन गरेको छ ।
आइतवार फिल्मले त्योभन्दा पनि बढी व्यापार गरेको छ । आइतवार यो फिल्मले झण्डै २७ करोड ९१ करोड बराबरको व्यापार गरेको छ । सोमवार पनि फिल्मले राम्रो व्यापार गरेको छ । सोमवार मात्र फिल्मले १७ करोड ५४ लाख बराबरको कमाइ गरेको हो ।
यो फिल्मले चार दिनमा ८८ करोड ३७ लाख बराबरको व्यापार गरेको छ ।
यो फिल्म २ सय करोड क्बलमा सामेल हुने आँकलन गरिएको छ । यो फिल्म दक्षिण भारतीय फिल्म ‘अर्जुन रेड्डी’ को रिमेक भर्सन हो ।
माफी मागेपछि मिल्यो फिल्म ‘बादशाह जुट’ र मुस्लिम संघबीचको विवाद
कपिल शर्माले एक एपिसोडका लागि लिन्छन् यति लिन्छन् पारिश्रमिक, भयो खुलासा
१४ वर्षको संघर्षपछि देव आनन्दका भतिजोले पाए पहिलो ब्रेक, परिश्रमिक कति ?